कुलमानसंग सांसद मोदीले पाँचलाख घुस मागेको खुलासा ? को हुन पाँच लाख माग्ने मोदी ? — Motivatenews.Com
कुलमानसंग सांसद मोदीले पाँचलाख घुस मागेको खुलासा ? को हुन पाँच लाख माग्ने मोदी ?
काठमाडौं – मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सत्तारढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीसँग भनाभन भयो ।
भनाभन हुँनुको कारण मोदीले कुलमानसंग पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको खुलेको छ । कुलमानले घुस नदिएपछि सांसद मोदीले भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएको खुलासा भएको छ ।
सांसद मोदीले प्राधिकरणको आयोजनामा असहयोग गरेका कारण काम ढिला भएको भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ६ महिनादेखि ३ किलोमिटर तार तान्न नदिनुले घुस मागेको स्पष्ट हुन्छ । मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेसनका लागि विद्युत पुर्याउन मोदीले उचालेका कारण स्थानियले काममा अवरोध गर्दै आएका छन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अघि सांसद मोदीले ५ लाख रुपैयाँ पाए अवरोध हटाउन सघाउने बताएका थिए ।
दुहवी सबस्टेसनबाट लगिएको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा मोरङको ग्रामथाम गाउँपालिकाको गिदनियामा स्थानीयको अवरोध छ । ग्रामथाम मोदीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।
सांसद मोदीले स्थानीयको मागलाई साथ दिँदै प्रसारण लाइनको तार तान्न दिएका छैनन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री वर्षमान पुनले हालै मात्र तार तान्न दिन मोदीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, उनले मानेका छैनन् ।
को हुन कुलमान माथि खनिने मोदी ?
अमनलाल मोदी सत्तारुढ नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन । उनी २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मोरङ ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता मोदी अघिल्लो पटक संसदमा भएको कुर्षि फालाफाल काण्डमा मुछिएको थिए । संघियताको विषयमा संसदमा भएको विवादपछि मोदिले आफू बसेको कुर्षि उठाएर रोस्टम तिर फालेका थिए ।
विराटनगरका केही सोलार इन्भटर ब्यापारीसंग राम्रो सांटघाट भएका मोदीले नेपालमा फेरी लोडसेडिङ गराउन खोज्ने गिरोहको पछि लागेर कुलमानमाथि प्रहर गरेको बताइएको छ । चुनावमा लिएको खर्च तिर्नका लागि उनले मिनी संसदमा कुलमानको झाँको झारेको एक जना प्रतिनिधि सभाका साँसदले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेकपाकै सांसदले भने, चुनावमा खर्च गर्नका लागि लिएको करोडौं रकम चुत्ता गर्नका लागि उनले हंगामा मचाएका हुन । कुलमानले भष्ट्राचार गरे नगरेको छानविन समितिले स्पष्ट पार्ला तर लोडसेडिङ अन्य पछि जसरी कुलमानलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको छ यसैको निरन्तरता स्वरुप मोदी कमरेडलाई प्रयोग गरिएको छ ।’
कुलमानलाई भ्रष्टाचारी भन्ने सांसदको नालीवेली, जसले ब्यापारी संग कुम्ल्याए करोडौं